u-Nortje ukhiphe izinti ezinkulu ukubeka ama-Proteas phezulu
Anrich Nortje of South Africa celebrates getting Ben Stokes of England wicket during day 1 of the International Test Series 2019/20 game between South Africa and England at Newlands Cricket Ground, Cape Town on 3 January 2020 © Shaun Roy/BackpagePix
u-Anrich Nortje uqhubeke nokwenza kahle ekuqaleni komsebenzi wakhe wama-Test ngokukhipha izinti ezibalulekile u-Joe Root no-Ben Stokes osukwini lokuqala le-Test yesibili bedlala ne-England e-Newlands namhlanje.
Ama-Standard Bank Proteas awuqale kahle unyaka omusha njengoba basalelwe ukukhipha inti eyodwa ukuze iphume yonke i-England ngomphumela osile emuva kokuthi izivakashi zinqobe i-toss okwesibili kwi-series.
Nokho bekune-bounce ne-carry, ikakhulukazi kwabashwiba ngase-Wynberg end, kube indawo enhle yokushaya futhi ama-Proteas angazizwa egculisekile ngokubeka i-England ku-262/9 izinti zikhishwe ama-seamers amane akhiphe izinti.
u-Nortje uphinde wakhombisa ukuthi akukho okungathatha isikhala sokushwiba amabhola aqondile ngokushesha. Ucishe wakhipha u-Root kabili emabholeni amathathu njengoba ibhola ebelinganqakwa lidlule ama-slips futhi wakhishwa emuva ibhola linqakwa u-Quinton de Kock enqake amabhola amahlanu. Manje i-keeper isinqake amabhola awu-13 kuma-innings amathathu kwi-series.
Kube ukushwiba okugculisayo kuma-Proteas waphinda u-Dwaine Pretorius wakhipha izinti ezimbili kuma-overs amane kwi-spell ebesibalulekile ngaphambi kwebhola elisha futhi u-Keshav Maharaj uvimbe endaweni eyodwa isikhathi esiningi osukwini.
Uwutholile umklomelo njengoba eshwibe wakhipha obalulekile oshayayo u-Joe Denly, kwathi othole ama-runs amaningi osukwini, u-Ollie Pope (56 not out off 132 balls, 7 fours), udinge i-umire’s call ukuze asinde ama-South African ecele i-review.
Kuma-sessions okuqala amabili ebehlukanisiwe njengoba i-England ithole u-67/2 ngaphambi kwesidlo sasemini kanye no-72/2 kweyesibili ngaphambi kokuthi umsebenzi wama-Proteas uziveze ngo-5/113 kwi-session yokugcina.
u-Pieter Malan ube i-Test cap yesi-108 yama-Proteas futhi uzothola ithuba lokukhombisa afika nakho osukwini lesibili.
i-Sunfoil Education Trust (SET) izuze ngenxa yama-boundaries no-six abashaywe kumdlalo yiwona womabili amaqembu kanye nezinti ezikhishiwe. Osukwini ithole u-R62 500 futhi kwadlula ku-R300 000 kwi-series.
u-Maketa uhlangana nama-Proteas amancane njenge-High Performance Consultant u-De Kock no-Philander bakhuphuke kuma-ICC Test rankings Ama-Proteas asiqale ngokunqoba isigaba esisha futhi athola amaphuzu okuqala e-WTC u-Petersen ubizwe okokuqala kuma-Proteas u-Burns uhola i-England ezama ukujaha umphumela oyirekhodi u-Markram ukhishiwe kwimidlalo esele kwi-England Test series u-Boucher ugculisekile ngenqubekelo phambili yama-Proteas u-Jacques Kallis umenyezelwe njengomeluleki wokushaya kuma-Proteas Bayisithupha abadlali abasha ababalwe kwiqembu lama-Proteas lama-Test India wrap up series to claim 120 Test match points u-Hamza uletha ukukhanya ekushayeni kwama-Proteas